mayhninsi – စာမျက်နှာ 19 – MBC
အမျိုးသမီးကိုယ်ထူကိုယ်ထ အဖွဲ့ဝင်များ စွမ်းဆောင်ရေးမြင့်တင်ခြင်း သင်တန်း
၂၀၁၉-ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၉-၂၃)ရက်များတွင် နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ်၊ ခရစ်ယာန် လူမှုဝန်ထမ်းခြင်း နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနမှ ဦးဆောင်၍ ECMDP – Empowering Community Managed Development Project ( Diakonia) အမျိုးသမီးကိုယ်ထူကိုယ်ထ အဖွဲ့ဝင်များ စွမ်းဆောင်ရေးမြင့်တင်ခြင်း သင်တန်းကို နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် ဘက်စုံခေါင်ဆောင်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းခန်းမတွင် နေ့စဉ် […]
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 19, 2019
မြန်မာနိုင်ငံ နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် အသင်းချုပ် ကူရှင်ခန်းမတွင် ဝန်ထမ်းများစုံညီတွေ့ဆုံပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၉)ရက် အင်္ဂါနေ့ နံနက်(၈း-၁၀း၃၀)နာရီအချိန်တွင် ပြုလုပ်ရာ အသင်းချုပ် ဌာန(၁၂)ခုမှ တာဝန်ခံများနှင့် ဝန်ထမ်းများ ခရီးပြုနေသူများမှလွဲ၍ စုံညီစွာတက်ရောက်ပါဝင်ပါသည်။ ရုံးအုပ်ကြီး ဆရာ မန်းဂီးဒီယံက သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး သိက္ခာတော်ရ […]
ရှမ်းတောင်အဖွဲ့ချုပ် အမျိုးသားဌာန၏ ပထမအကြိမ် အမျိုးသားများစုံညီဓမ္မသဘင်ကို ၂၀၁၉ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၃-၁၆)ရက် များတွင် တောင်ကြီးမြို့ ပထမလူမျိုးပေါင်းစုံနှစ်ခြင်းအသင်းတော်တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပရာ နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် အမျိုးသားဌာန သဘာပတိနှင့် တာဝန်ခံတို့လည်း တက်ရောက်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားစုစုပေါင်း (၁၃၀)ဦးခန့် တက်ရောက် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ သင်ကြားခြင်းကို ရှမ်းတောင်အဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Rev. စောအေးဝီးကလည်းကောင်း၊ […]
Celebrating Families and Child Protection Training
2019 ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၈-၂၂)ရက်တွင် နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ်၊ ခရစ်ယာန်လူမှုဝန်ထမ်းခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံ ခရစ်ယာန် အသင်းတော်များ ကောင်စီနှင့် World Vision (Myanmar) တို့ပူးပေါင်းကျင်းပသော Celebrating Families and Child Protection Training ကို အသင်းချုပ် အစည်းအဝေးခန်းမ(၁)တွင် ပြုလုပ်ရာ ဖွင့်ပွဲအစီအစဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကောင်စီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Rev. […]